Toddobaadkii Almedal ee siyaasadda oo Gotland ka bilowday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Toddobaadkii Almedal ee siyaasadda oo Gotland ka bilowday
La daabacay måndag 1 juli 2013 kl 09.46
Almedalen. Foto: Sveriges Radio
Waxaa maalintii axadda ka bilowday magaalada Visby ee jasiiradda Gotland oo loo yaqaan toddobaadka Almedal ama af-iswiidhishka Almedalsveckan. Toddobaadkas waxaa halkaa isugu yimaada siyaasiinta xisbiyada, wakiilo ka socda ururada iyo shirkadaha iyo saxaafadda. In kastoo hadda hal sano ka hartay xilligii doorashada ayaa haddana ka soo qaybgalka toddobaadka Almedal lagu wadaa in uu gaari doono heerkii ugu sarreeyey.
Hoggaamiyaha xisbiga dimoqraadiyadda masiixiga ah Göran Hägglund ayaa galabtii axadda khudbad ka jeediyey fagaarek u yaal magaalada Visby, halkaas oo kaga hadlay arrimo meelo badan taabanaya. Göran Hägglund wuxuu ballanqaaday in uu xisbigiisu ku dadaali doono hirgelinta heerka shanaad ee dhimista canshurta. Khudbooyinka iyo kulamada ayaa halkaa ka sii socon doona.
Maanta oo bisha Luulyo kowda tahayna waxaa halkaas siyaasaddiisa ku soo bandhigaya xisbiga Sverigedemokraterna oo uu hoggaamiyiisu maanta halkaas shir-jaraaid ku qabtay. Wuxuu shirkaas jaraaid ku soo qaaday habka uu xisbigiisu u doonayo in shaqooyin lagu abuuro. Mar la weyddiiyey halka ay ka imaneyso lacagta lagu maalgelinayo shaqa-abuuriddaasi, wuxuu ku jawaabey in ay xilliga deyrta soo socota ka hadli doonaan arrimaha la xiriira dhaqaalaha iyo maalgelinta.